Etu esi wụnye iOS 13 ma ọ bụ iPadOS na iPhone ma ọ bụ iPad | Akụkọ akụrụngwa
Oge ọ bụla Apple, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla wepụtara ọhụụ ma ọ bụ mmelite nke sistemụ arụmọrụ ya, ọ ga-adị mma ka ị chere otu ụbọchị iji hụ na ọ nweghị nsogbu arụmọrụ nke nwere ike nweta iji gbanyụọ ngwaọrụ anyị. Mana nke ahụ bụ ihe betas bụ maka.
Ka ọnwa ole na ole gachara, ụlọ ọrụ Cupertino ewepụtala ụdị ya, yabụ nke kwụsiri ike iOS 13, ụdị ọhụrụ nke iOS nke na-enye nnukwu ihe ama na iPad. N'ezie, a gbanwere ụdị iPad ahụ iPadOS. Lee, anyị na-egosi gị otú wụnye iOS 13 / iPadOS gị iPhone ma ọ bụ iPad.
Tupu emelite anyị ngwaọrụ anyị ga lelee abughi iPhone ma obu iPad anyi dakọtara na ụdị ọhụrụ nke iOS a. Apple lekwasịrị anya na mbọ ya niile na iOS 12 iji meziwanye arụmọrụ ya, ihe ọ rụpụtara nke ọma, ọbụlagodi na ngwaọrụ ochie, nke gosipụtara na iOS 13 agaghị adakọ na otu ọnụ ọgụgụ dị ka iOS 12.
1 IOS 13 Comp Kwekọrọ n'Ozizi Ngwaọrụ
1.1 iPhone dakọtara na iOS 13
1.2 iPad dakọtara na iOS 13
1.3 iPhone na iPad adabaghị na iOS 13
2 Etu esi ewunye iOS 13
2.1 Ndabere na iTunes
2.2 Ndabere na iCloud
3 Imelite na iOS 13
3.1 Melite na iOS 13 si iPhone ma ọ bụ iPad
3.2 Melite na iOS 13 si iTunes
iOS 13 dakọtara na njedebe ndị ahụ nke 2 ma ọ bụ karịa GB nke RAM na-achịkwa. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ị nwere iPhone 6s gaa n'ihu ma ọ bụ ọgbọ nke abụọ iPad Ikuku i nwere ohere iji melite na iOS 13.
Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, ị nwere iPhone 5s, iPhone 6, iPad Ikuku ma ọ bụ iPad mini 2 na 3, ị ga-enwe dozie maka ịrapara na iOS 12, ụdị nke na-enye arụmọrụ nke ọtụtụ ga-achọ na ụdị iOS nke ngwaọrụ ha kwụsịrị ịnata mmelite ogologo oge gara aga.
iPhone dakọtara na iOS 13
iPhone 11 (ụlọ ọrụ nrụpụtara na iOS 13)
iPhone 11 Pro (ụlọ ọrụ ebuputere iOS 13)
iPhone 11 Pro Max (ha sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na iOS 13)
iPad dakọtara na iOS 13
iPad Ikuku 2019
iPad Pro 9,7 anụ ọhịa
iPad Pro 12,9-anụ ọhịa (ụdị niile)
iPad Pro 10,5 anụ ọhịa
iPad Pro 11 anụ ọhịa
iPhone na iPad adabaghị na iOS 13
iPad Ikuku (ọgbọ XNUMX)
Etu esi ewunye iOS 13
Mgbe otu afọ dị na iOS 12, ngwaọrụ anyị bụ jupụtara na faịlụ junk nke na-arụ ọrụ nke anyị arụnyere na ngwaọrụ anyị, yabụ ọ bụ oge dị mma iji kpochapụ wepụrụ ebubo. Nke ahụ bụ, anyị ga-aga n'ihu ihichapu ngwaọrụ anyị niile iji mee nrụnye dị ọcha, site na ncha, na-enweghị ịdọrọ arụmọrụ ma ọ bụ nsogbu oghere nke ngwaọrụ anyị nwere ike ịta ahụhụ.
Ọ bụrụ na anyị emeghị, ngwaọrụ anyị ga-yikarịrị anaghị arụ ọrụ nke ọmadị ka ọ na-emetụta ọgba aghara dị n'ime ụdị nke ngwa / faịlụ ndị anaghị eji ma ka dị na ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na anyị emee iOS 13 dị ọcha ma weghachite ndabere, anyị ga-ahụ otu nsogbu na ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa ngwa na-emelite ngwaọrụ anyị na iOS 12 na iOS 13 na-enweghị ihicha ọdịnaya ya niile.
Ndabere na iTunes
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ imelite iOS 13 si iOS 12, ihe mbu ị ga - eme bụ ime nkwado ndabere. Wụnye ụdị nke sistemụ arụmọrụ karịa ụdị nke gara aga nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu na amanye anyị ka anyị weghachi ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ma anyị enweghị nkwado ndabere, anyị ga-atụfu ozi niile anyị chekwara na ọdụ anyị. Iji zere ụdị nsogbu a, tupu imelite ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ, na nke a, iOS 13, anyị ga-emerịrị mee nkwado ndabere nke ngwaọrụ anyị site na iTunes.
Iji mee nkwado site na iTunes, anyị ga - ejikọrịrị iPad ma ọ bụ iPhone anyị na kọmpụta, mepee iTunes wee pịa akara ngosi na - anọchite anya ngwaọrụ anyị. Na windo a ga-egosipụta, anyị ga-pịa ndabere. Usoro Ọ ga-ewe karịa ma ọ bụ obere oge dabere na ohere anyị nwere na ngwaọrụ anyị ka anyị were ya dị mfe.
Ndabere na iCloud
Ọ bụrụ na anyị nwere atụmatụ nchekwa iCloud, foto anyị niile dị n'igwe ojii, yana akwụkwọ niile dakọtara na ọrụ nchekwa igwe ojii nke Apple. Nke a anyị ị ga-ezere inwe nkwado ndabere site na ọdụ anyị ebe ọ bụ na echekwara ozi niile dị na ya n'enweghị nsogbu. Ozugbo emelitere ọnụ ya, anyị ga-ebudata ngwa niile anyị rụnyere.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ debe otu ngwa anyi nwere na iOS 12, si otú ịdọrọ niile nsogbu na m kọwara n'elu, anyị nwere ike ime ka a ndabere oyiri nke anyị ọnụ na iCloud, nke mere na ozugbo ọ na-e emelitere, anyị nwere ike iweghachi niile ngwa na anyị arụnyere.
Imelite na iOS 13
Mgbe emechara usoro niile nke m kọwara n’elu, oge achọrọ nke nweta nkwalite na iOS 13. Anyị nwere ike ime usoro a site na iPhone ma ọ bụ iPad ma ọ bụ ozugbo site na iTunes. Ọ bụrụ na anyị eme ya site na iPhone ma ọ bụ iPad, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Melite na iOS 13 si iPhone ma ọ bụ iPad
N'ime ngwanrọ ngwanrọ a ga-egosi na anyị nwere ụdị ọhụrụ nke iOS iji wụnye, ọkachasị iOS 13. Mgbe ịpị ya, nkọwa nke ọhụrụ a version.
Iji gaa n'ihu na nwụnye, anyị ga-pịa Ibudata na Wụnye.
Maka mmelite ahụ, njedebe anyị ga-abụrịrị jikọọ na netwọk WiFi na chaja. Batrị ọnụ ya ga-adị elu karịa 20% maka usoro nrụnye ịmalite.
Melite na iOS 13 si iTunes
Ọ bụrụ na ị bụ kpochapụwo ma chọọ ịga n'ihu na-emelite ngwaọrụ gị site na iTunes, lee usoro ị ga-eso.
Nke mbu anyi aghaghi ime jikọọ iPhone ma ọ bụ iPad anyị na kọmputa.
Anyị na-emeghe iTunes wee pịa ya akara ngosi nke na-anọchite anya ngwaọrụ ahụ anyị chọrọ imelite.
Na akụkụ aka nri elu, ebe ozi njedebe gosipụtara, pịa Lelee maka mmelite.
Ozugbo anyị nabatara ọnọdụ ndị ahụ, iTunes ga-amalite budata melite na emesia melite ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi wụnye iOS 13 ma ọ bụ iPadOS na iPhone ma ọ bụ iPad gị